Dhaxalsugaha boqortooyada Ingiriiska iyo xaaskiisa oo iska casilay xilalkii ay boqortooyada u hayeen. - NorSom News
Dhaxalsugaha boqortooyada Ingiriiska iyo xaaskiisa oo iska casilay xilalkii ay boqortooyada u hayeen.
Prins Harry oo ah wiil ay ayeeyo u tahay boqorada ingiriiska, kana mid ah dhaxalsugayaasha boqortooyada Ingiriiska, iyo xaaskiisa Meghan ayaa cadeeyey in wixii hada laga bilaabo ay sii adeegsan doonin magaca iyo mansabkii ay ku lahaayeen aqalka boqortooyada. Sidoo kalana waxey lumin doonaan dhaqaalihii ay ku heli jireen magaca boqortooyada.
Lamaanahaan ayaan sidoo kale si toos ah u matali doonin boqoradda. Waxaana looga fadhiyaa iney soo celiyaan lacag dhan £2.4m taasi oo lagu dayac tiray gurigooda ku yaalla UK.
Arrintan ayaa dhaqan geli doonta bilaha soo socdo ee sannadkan, sida lagu sheegay war kasoo baxay aqalka boqortooyada dalka
Warbixintan ayaa ku soo beegmeysa ka dib markii Isniintii ay boqoradda wadahadal la yeelatay lamaanaha oo ay kala hadashay mustaqbalkooda.
Lammaanaha ayaa horay u shaaciyay iney doonayaan iney ka fariisanayaan xilalka heerka sare ah ee ay u hayaan Boqortooyada iyo iney qeybinayaan waqtiyada ay ku noolaayaan UK iyo Canada.
Go’aanka ay gaareen ayaa dhaliyay su’aalo badan oo ku aaddan qaabka uu noqon doono dowrka ay ku leeyihiin qoyska Boqortooyada UK.
Boqoradda ayaa sheegtay ka dib bilooyin ay socdeen wadaxaajoodyo oo ay ka mid ahayd tii ugu dambeysay ay si wada jir ah isugu afgarteen iney taageero u fidiso wiilka ay ayeeyda u tahay iyo qoyskiisa.
“Harry, Meghan iyo Archie waxay markasto ahaan doonaan xubno laga jecel yahay qoyskayaga”.
Waxay uga mahadcelisay ”shaqadoodii wanaagsanayd iyo sidii ay Meghan durbadiiba ula qabsatay qoyska boqortooyada”.
Bishii October ee sannadkii hore, Meghan ayaa dacwad ku soo oogtay wargeyska lagu magacaabo Mail On Sunday ka dib markii uu daabacay in si sharciga ka baxsan ay u shaacisay mid ka mid ah warqadaha sida khaaska ah loogu soo diray. Wargeyska ayaa difaacay qaabka uu u baahiyay sheekadaasi.
Amiir Harry ayaa xilligaasi sheegay in xaaskiisa ay “si arxan darro ah u daba dhigteen wargeysyada afka dheer ee Britain”.
Filim ay noolasheeda uga hadleysay oo laga baahiyay telefishinka ITV, ayaa Meghan waxa ay ku sheegtay in hooyonimada ay tahay arin adag iyadoo sababtana ku sheegtay, diiradda xooggan ee ay ku hayaan wargeysyada. “Ma jirto cid i weydiisa xaaladeyda,” ayay tiri.
Amiir Harry ayaa lambarka lixaad uga jira liiska kala horeynta ee dhaxalka kursiga Boqortooyada, waxaana ka horreeya Amiir Charles, Amiir William iyo saddexda canug ee uu dhalay.
Previous articleSiv Jensen oo Keshvarigii xirnaa kala wareegi doonto booska baarlamaanka iyo mushaarkiisaba.
Next articleSoomaaliya oo qaabileyso dadka Daacish ku biiray ee Sweden ka tagay.